मेन WIC | जेपीएमए, इंक
सुझाव र FAQ हरू
EWIC मा स्वागत छ!
EWIC का साथ तपाईको घर W W सुविधाहरू तपाइँको WW अफिसमा तपाइँको eWIC कार्डमा राखिन्छ।
तपाईंको खाद्य पदार्थहरूको सूची तपाईंको लाभ अवधिको लागि सुरु र अन्त्य मितिको साथ तपाईंलाई दिइनेछ।
तपाइँले तपाइँको ME eWIC कार्ड ME WIC अधिकृत स्टोरहरु मा तपाइँको WIC अनुमोदित खाना किन्न को लागी प्रयोग गर्नुहुनेछ।
तपाईंले आफ्नो मेन eWIC कार्ड प्रयोग गर्नु अघि,
तपाईंले digit-अंक व्यक्तिगत चयन गर्नुपर्नेछ
पहिचान नम्बर (PIN)।
कृपया यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
तपाईंको eWIC कार्डको पछाडि फोन नम्बर कल गर्नुहोस्
तपाईंको कार्डको अगाडि तपाईंको हालको कार्ड नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्
तपाईंको जन्म मितिमा २ अंकको महिना, २ अंक दिन, र digit अंकको वर्ष प्रविष्ट गर्नुहोस्
तपाईंको हालको मेलिंग जिप कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्
निजीकृत--अंकको पिन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्छ
पुष्टिकरणको लागि तपाईंको निजीकृत--अंक पिन नम्बर पुन: प्रविष्ट गर्नुहोस्
तपाईंको लाभ ब्यालेन्स, खरीद इतिहास, र खाता जानकारी जाँच गर्न eWIC ग्राहक सेवा कल गर्नुहोस्। 1-855-250-8945
eWIC कार्ड केयर
तपाईंको eWIC कार्ड सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस्, जस्तै तपाईंको वालेट वा पर्स।
तपाईंको eWIC कार्ड सफा राख्नुहोस्, प्रत्यक्ष सूर्यको किरणबाट टाढा, र मैग्नेट र इलेक्ट्रोनिक्सबाट टाढा।
कसैसँग तपाइँको पिन साझेदारी नगर्नुहोस्।
यदि कसैले तपाइँको eWIC कार्ड फेला पार्दछ र तपाइँको पिन थाहा छ भने, तिनीहरूले तपाइँका सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। ती सुविधाहरू बदल्ने छैनन्।
पिन / eWIC कार्ड प्रतिस्थापन
यदि तपाइँ तपाइँको पिन बिर्सनुभयो भने, eWICCustomer सेवा मा कल गर्नुहोस् 1-855-250-8945 यसलाई परिवर्तन गर्न।
यदि तपाइँको eWIC कार्ड हराएको छ भने, चोरीको क्रममा, eWIC ग्राहक सेवाW लाई कल गर्नुहोस् 1-855-250-8945.
प्रतिस्थापन eWIC कार्डको लागि, yourlocal WIC क्लिनिक कलमा जानुहोस् 1-800-437-9300 तपाइँको eWICcard प्रतिस्थापित गर्न।
के हुन्छ यदि मैले मेरो PIN बिर्सें वा यसलाई गलत प्रविष्ट गरेँ भने?
यदि तपाइँ तपाइँको पिन लगातार चार पटक गलत प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तपाइँको eWIC कार्ड आधी रात सम्म लक हुनेछ। तपाइँ तपाइँको पिन eWIC ग्राहक सेवा कल गरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाइँ तपाइँको पिन रिसेट गर्नुभएन भने, तपाइँको eWIC कार्ड स्वचालित रूपमा आधी रातमा अनलक हुनेछ, यद्यपि तपाइँले तपाइँको पिन थाहा पाउनुपर्नेछ तपाइँको eWIC कार्ड प्रयोग गर्नका लागि।
WIC फूडहरूको लागि किनमेल गर्ने
तपाईंको WIC खाद्य लाभ सन्तुलनलाई थाँहा गर्नुहोस् जब तपाईं स्टोरमा जानुहुन्छ।
तपाईंको WIC खाद्य पदार्थहरू तपाईंको परिवार लाभ सन्तुलन र ME WIC द्वारा स्वीकृत खाद्य सूची प्रयोग गरेर छान्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग तपाइँको WIC अर्डर मा s० भन्दा बढी व्यक्तिगत UPC हरू छ भने तपाइँले अन्य खरीदहरु बाट WIC आईटमहरू अलग गर्नु पर्छ।
क्यासियरले WIC खाद्य वस्तुहरू स्क्यान गर्दछ।
सँधै eWIC कार्ड तपाईंको पहिलो भुक्तानी प्रकारको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको eWIC कार्ड स्वाइप गर्नुहोस् जब PIN प्याडमा प्रोम्ट गरिन्छ र त्यसपछि तपाईंको चार-अंक पिन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
मध्य लेनदेन मोचन रसीद समीक्षा गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई क्यासियरले तपाईंलाई प्रदान गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि WIC खाद्य पदार्थहरू जुन तपाईंले सोच्नु भएको थियो eWIC का साथ भुक्तान गरिनु पर्ने थियो यो मोचन रसीदमा सूचीबद्ध छन्
लेनदेन स्वीकार गर्न "हो" थिच्नुहोस्, वा "होईन" यदि तपाइँले सोच्नुहुन्छ कि खाद्य पदार्थहरू eWIC का साथ भुक्तानी भइरहेको थियो भने सूचीबद्ध छैन। आईटम्स जुन eWIC का साथ भुक्तान गर्न सकिदैन तपाइँको अर्डरबाट हटाउन सकिन्छ, वा तपाइँ उनीहरूलाई फरक टेन्डर प्रकारको साथ तिर्न सक्नुहुनेछ (जस्तै, SNAP बेनिफिट्स, डेबिट, क्रेडिट, वा नगद)।
तपाईंको कार्ड र रसिद लिनुहोस्।
तपाईंको अन्तिम रसिद राख्नुहोस् - यसले महिनाको लागि तपाईंको बाँकी खाद्य लाभहरू प्रदर्शन गर्दछ, र यदि यो समस्या खडा भयो भने तपाईंको WIC अफिसलाई प्रदान गर्न आवश्यक छ।
WICShopper अनुप्रयोगमा उत्पादनहरू स्क्यान गर्नुहोस् उनीहरू निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरू WIC- योग्य छन्। तपाइँको eWIC कार्डमा खरीद गर्नु भन्दा पहिले तपाइँको WIC सुविधाहरू (फूडहरू र सुत्र) छन् भनेर प्रमाणित गर्न नबिर्सनुहोस्!
WICShopper (वा तपाइँको छापिएको संस्करण) मा तपाइँको मेन WIC स्वीकृत फूड सूची (AFL) हेर्नुहोस् WIC बेनिफिट्स (खाद्य पदार्थ र सूत्र) किन्न सक्नुहुन्छ।